UE BOOM2သုံးသပ်ချက် - ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုဆန်းစစ်ခြင်း။ Gadget သတင်း
UE BOOM2review: အရည်အသွေးနှင့်အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ကြိုးမဲ့စပီကာတစ်ခုအတွက်အထူးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်
Alfonso De Frutos | | စပီ, reviews
Ultimate Ears သည်ကဏ္ the အတွင်းရှိအရေးအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ BOOM လိုင်းမှစပီကာများသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်း၊ ခံနိုင်ရည်နှင့်အသံအရည်အသွေးတို့ကြောင့်အံ့အားသင့်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်ငါသည်သင်တို့ကိုပြည့်စုံဆောင်ခဲ့ရမည် UE BOOM2စပီကာပြန်လည်သုံးသပ်, နောက်ဆုံးပေါ်ကိရိယာ၏ပုံစံနှင့်ဂီတချစ်သူများကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
UE BOOM ကိုဆက်ခံသူတွင်က အရင်မော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၅% ပိုသောသင်၏စပီကာများတွင်ပါဝါရှိသည်ဘလူးတုသ်အကွာအဝေးမီတာ ၃၀ အထိရှိသည့်အပြင်သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယူနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ရှိခြင်းအပြင်၎င်းသည်ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက IPX7 လက်မှတ် စိတ်ပူစရာမလိုဘဲရေထဲနစ်မြုပ်နိုင်အောင်စျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးကြိုးမဲ့စပီကာတစ်လုံးရှိတယ်။
1 UE BOOM2သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအခြေခံကျသောဒီဇိုင်းရှိသည်
2.1 UE BOOM2စွမ်းဆောင်ရည်
UE BOOM2သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအခြေခံကျသောဒီဇိုင်းရှိသည်
UE BOOM2ကိုပထမဆုံးရွေးသောအခါသတိပြုမိသောအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားပြီး၎င်းင်း၏အပေါက်တစ်ခုစီမှအရည်အသွေးကိုထုတ်ပေးသည်။ စပီကာတွင်ဖုန်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်၌ဖုံးအုပ်ထားသောရော်ဘာဖုံးအုပ်ထားခြင်းကြောင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ထိတွေ့မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် UE BOOM2စိုစွတ်နေလျှင်တောင်မှ၎င်းကိုမချောက်မလှန်ဘဲကောက်ယူနိုင်သည်။
သေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ် 67mm အချင်းနှင့် 180mm အမြင့် UE BOOM2ကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယူနိုင်သည်။ ကိရိယာ၏ချုပ်ကိုင်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်၎င်း၏အဝိုင်းပုံသဏ္ာန်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အလေးချိန် ၅၄၈ ဂရမ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယူရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောပစ္စည်း၏ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်ခဲယဉ်းသည်။
UE BOOM2၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည့်နေရာဖြစ်သည် စပီကာဖွင့် / ပိတ်ခလုတ်၊ UE BOOM2ကိုမည်သည့် Bluetooth စက်နှင့်မဆိုထပ်တူကျအောင်ပြုလုပ်သောအခြားသေးငယ်သည့်ခလုတ်တစ်ခုအပြင်။
ရှေ့တွင်ရှိပြီးသား အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်သော့။ သူတို့၏လမ်းကြောင်းသည်မှန်ကန်ရုံမျှမက၎င်းတို့အားသင်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖိအားပေးသည်ကိုသူတို့သိ ရှိ၍ ထိတွေ့မှုကိုအလွန်အောင်မြင်စေသည်။ ၎င်း၏အနေအထားအဆင်ပြေခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစပီကာတွေကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုယူဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပါ။ အသံတိုးတိုး၊ အသံချဲ့ခြင်း၊ သီချင်းတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းစတဲ့သင့်ဖုန်းကိုကမ်းခြေမှာမထိစရာမလိုဘဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ နောက်ပိုင်းမှာဒီ function ကိုငါပြောမယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် UE BOOM2၏အောက်ခြေတွင် port တည်ရှိသည် ဖုန်းကိုအားသွင်းရန် micro USB၊ အပေါင်းa3.5mm အသံ output ကို နှင့်မည်သည့်ထောက်ခံမှုအပေါ်စပီကာကိုကိုင်ထားရန်သေးငယ်တဲ့လက်စွပ်။ တိုတိုပြောရရင် UE BOOM2မှာကြီးကျယ်တဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုရှိပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နေရာကိုမဆိုယူဆောင်သွားမှာပါ။ သင်ဆိုင်ကယ်စီးချင်ပါသလား? စပီကာကိုရေအောက်နေရာချထားပြီးသီချင်းနားထောင်ပါ။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သူတို့ကိုငါကမ်းခြေ၊ နှင်းလျှောစီး၊ ကနူးလှေနဲ့နေ့တိုင်းရေချိုးခန်းထဲမှာသုံးခဲ့တယ်(အိမ်နီးချင်းတွေကငါ့ကိုတောင်မုန်းတယ်) UE BOOM2နစ်မြုပ်သွားတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်ရေထဲမှာသုံးမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းကိုသင့်အင်္ကျီနဲ့အောက်ခြေရှိလက်စွပ်မှချည်နှောင်ထားဖို့လိုတယ်။ ကြောက်တယ်
UE BOOM2၏ဒီဇိုင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောပေါ့ပါးသည့်ကိရိယာတစ်ခု၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုဒီစပီကာအသံသနည်း? ငါဆိုသည်ကား၎င်း၏တိုင်းတာမှုများထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, ငါကြိုးစားခဲ့သောအကောင်းဆုံးကြိုးမဲ့စပီကာတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင်းငါပြောပြီ။ ဒီကိစ္စကိုမ ၀ င်ခင်မှာ UE BOOM ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေနဲ့မင်းကိုထားခဲ့ပါ
UE BOOM2စွမ်းဆောင်ရည်
ရေစိုခံ (IPX7: မိနစ် ၃၀ နှင့်အနက် ၁ မီတာအနက်) နှင့်ဒဏ်ခံနိုင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
၁၅ နာရီဘက်ထရီသက်တမ်း (အားသွင်းချိန် - ၂.၅ နာရီ)
မီတာ ၃၀ အကွာအဝေးရှိ Bluetooth A2DP
ကြိမ်နှုန်း: 90 Hz - 20 kHz
စက္ကူပေါ်မှာငါတို့အချို့ရှိသည် အလွန်ပြည့်စုံသောစပီ။ သူတို့ကိုအသုံးချတဲ့အခါသူတို့ကပိုကောင်းတယ်။ ဆောင်းပါးရဲ့အစမှာပြောခဲ့တာက၊ ဒီ UE BOOM2ဟာအရင်မော်ဒယ်လ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် ၂၅% ပိုအားပိုတယ်။ ပြီးတော့မော်ဒယ်နှစ်ခုစလုံးကိုစမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထုတ်လုပ်သူကပုံကြီးချဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းနေပြီ။
စပီကာဘယ်လောက်ပဲအသံကျယ်နေပါစေ၊ အသံအရည်အသွေးညံ့နေရင်သူ့ရဲ့စွမ်းအားကအသုံးနည်းတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ UE BOOM2စပီကာသည်အလွန်ကောင်းသောအသံဖြစ်သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အရည်အသွေးမြင့်တဲ့အသံကိုပေးတယ်။
အသံအတော်လေးမျှမျှတတတစ် ဦး ရောက်ရှိသည် အပြည့်အဝပါဝါ၏ 90% အထိတကယ်ကောင်းသောအသံအရည်အသွေး။ ထို မှနေ၍ အနည်းငယ်ပုံပျက်ခြင်းနှင့်ဆူညံသံထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သော်လည်းဤစပီကာ၏မယုံနိုင်လောက်သောစွမ်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူအများစုသည်စပီကာ၏အသံအတိုးအကျယ်ကို ၈၀% ထက် ပိုမို၍ မြှင့်တင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ပါတီတစ်ခုသို့မဟုတ်အသားကင်ရန်အတွက်နေရာသတ်မှတ်ရန်ပင် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်လုံလောက်မှုမရှိပေ။
Su Bluetooth Low Energy သည်မီတာ ၃၀ အကွာအဝေးရှိသည်စပီကာများကိုလုံလောက်သောအကွာအဝေးထက် ပို၍ အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ငါ့အိမ်ထဲမှာ ၁၅ မီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖုန်းကိုထားခဲ့ပြီးတံခါးနှစ်ခုကြားမှာရှိတယ်။ စပီကာကအလုပ်ဖြစ်တယ်။
La UE BOOM2ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည် ၁၅ နာရီအသုံးပြုမှုဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည် ၁၅ နာရီအထိအသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ၃၀ မှ ၄၀% အထိရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျူပင်ကို တင်၍ စပီကာကို ၈၀% အားဖြင့်တင်ထားသည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည် ၁၂ နာရီအထိကျဆင်းသွားသည်။ ထို့အပြင်စပီကာသည်အသုံးမပြုဘဲခေတ္တခဏအိပ်ပျော်နေသောအခြေအနေသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ ထို့ကြောင့်လျှောက်လွှာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် UE BOOM 15 ကိုကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖွင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ပြီးတော့ဘက်ထရီကိုနှစ်နာရီအတွင်းမှာအားသွင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်စရာဘာမှမရှိဘူး။
တစ် ဦး ကအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့အသစ်အဆန်းနှင့်အတူပါရှိသည် လက်ဟန်ခြေဟန်ထိန်းချုပ်မှု; ဥပမာအားဖြင့် UE Boom2ကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်တင်ပြီးစပီကာ၏အထက်ပိုင်းကိုအခြားတစ်ဖက်၏လက်ဖြင့်နှိပ်သောအခါအထက်ပိုင်းကိုပြန်ထိသည်အထိပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုခေတ္တရပ်နားသည်။ အမြန်ထိတွေ့မှုနှစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သီချင်းကိုတိုးချဲ့မည်။ သီချင်းဖွင့်ချင်ရင်ဖုန်းကိုတို့ထိစရာမလိုပါဘူး။
Ultimate Ears ရှိယောက်ျားများသည်aကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းမှ UE BOOM2၏ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုမည့်အမှန်တကယ်ပြည့်စုံသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်း၊ Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်, သင်သည်ဘက်ထရီအဆင့်၊ စပီကာအသံအတိုးအကျယ်အပြင်စမတ်ဖုန်းအမြောက်အမြားကိုတစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့လိုချင်သည့်တေးဂီတကိုဖွင့်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေစသည့်အလွန်ထူးဆန်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကိရိယာများစွာတွင်တေးဂီတကိုနားထောင်ရန် UE BOOM သို့မဟုတ် UE Roll စပီကာအမြောက်အများကိုပင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကိရိယာကောင်းတစ်ခုနှင့်သင့်တော်သောအသံစနစ်ကိုသင်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သောကြောင့်ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
နောက်ထပ်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူပါရှိသည် IPX7 လက်မှတ် ၎င်းသည် UE BOOM2ရေခံနိုင်ရည်ကိုပေးပြီးမိနစ် ၃၀ အတွင်းနက်ရှိုင်းသော ၁ မီတာအထိနက်ရှိုင်းစွာနစ်မြုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငါဆီးနှင်းနှင့်ရေထဲမှာစမ်းသပ်ပြီးပါပြီနှင့်စပီကာနေဆဲperfectlyုံအလုပ်လုပ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း၊ bluetooth signal ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရေအောက်မှာသူတို့အသံထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ UE BOOM 1 ကိုရေထဲမှထုတ်ယူရုံသာမကအသံအရည်အသွေးကိုလည်းဆက်လက်ခံစားနိုင်ရန်လွယ်ကူသည်။
၎င်းအတွက် UE BOOM2တွင်ထွက်ရှိမှုများကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အဖုံးများရှိသည်။ ၎င်းသည်ရေမ ၀ င်စေရန်ကောင်းစွာပိတ်ထားရမည်။ သို့သော်မည်မျှရွာသွန်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆီးနှင်းဖြစ်စေ၊ မိုးကြိုးဖြစ်စေဖြစ်စေစပီကာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပြproblemsနာမရှိဘဲ။ မင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကလား။ အဆိုပါ UE BOOM2မည်သည့်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများမရှိကြပါဘူး။
Ultimate Ears မှသူတို့သည် UE BOOM2ကိုစစ်ရေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မပေးလိုကြသော်လည်းငါပြောရမည် ကိရိယာသည်သက်ရောက်မှုများနှင့်ရေတံခွန်များကိုအမှန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ တင်ဆက်သည့်အချိန်တွင်လူအများအပြားကသူတို့၏ခုခံမှုကိုပြသရန်ထိပ်တက်ကြသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ပုံစံသည်အကြိမ်အနည်းငယ်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရိုးသားပါကအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ပျက်စီးမှုမှမခံစားရပါ။ UE BOOM2သည်ခက်ခဲသောစပီကာတစ်ခုဖြစ်သည်။
El UE BOOM2ကိုအရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်ရရှိနိုင်သည် ဒါကြောင့်သင်ဟာသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်တရားဝင်ဈေးနှုန်းဖြစ်သောယူရို ၁၉၉ ဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင် Amazon တွင် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာနှိပ်ပါ သာ 133 ယူရိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်ရေစိုခံ Bluetooth စပီကာဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားပါကတကယ့်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။
သုံးသပ်ချက် - Alfonso De Frutos
၎င်းသည်ရောင်းချပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏တရားဝင်ဈေးနှုန်းမှာယူရို ၂၀၀ ဖြင့်ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းနိုင်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » စပီ » UE BOOM2review: အရည်အသွေးနှင့်အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ကြိုးမဲ့စပီကာတစ်ခုအတွက်အထူးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်
ငါ့မှာ UEBOOM ရှိတယ်၊ အားလုံးကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အတွင်းဘက်ထရီကုန်သွားပြီဆိုရင်စပီကာကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းတို့တွင်အစားထိုးရန်ဘက္ထရီများမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဘက်ထရီမရှိဘဲစပီကာသည်လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုရှိလျှင်သော်မှအလုပ်မလုပ်ပါ။ ပရိုဂရမ်လိုက်နာမှု - စပီကာသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်နေ သ၍ အမှိုက်ပုံးထဲမှကြာရှည်ခံသည်။
ရီကာဒို Reyes ဟုသူကပြောသည်
ငါ UE Boom2ကိုဝယ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါက ၁၂ နာရီကြာအောင် ၈၀% အသံအတိုးအကျယ်နဲ့အရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီး ၂ နာရီကြာတယ်။ လိမ်တယ်၊ နောက်ဆုံးငါ JBL ကိုပြောင်းလိုက်ရင်ထုတ်ကုန်ကောင်းရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။ သတ်မှတ်ချက်များကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်နှင့်စမ်းသပ်ထားခဲ့ကြသည်
Ricardo Reyes ကိုပြန်ပြောပါ
ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုတကယ်စမ်းသပ်တယ်လို့ခင်ဗျားထင်သလား။ နုံ အင်တာနက်ပေါ်တွင်များပြားလှသော၊ မိမိကိုယ်ကို“ ကျွမ်းကျင်သူ”၊ “ နည်းပညာကိုနှစ်သက်သူ” သို့မဟုတ်အခြားဗုံးကြဲသောစကားစုများဟုခေါ်သောဤဇာတ်ကောင်များသည်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုကူးယူခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်း၊ ၎င်းတို့ကိုအနည်းငယ်လှအောင်လုပ်ခြင်းနှင့်လူသိရှင်ကြားပြုလုပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကသူတို့ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အခမဲ့ထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်။
ကောင်းပြီ၊ ကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ၎င်းမှာ ၇၀ နဲ့ ၈၀ မှာ ၁၀ နာရီကျော်ကြာရန်ကြာမြင့်ကြောင်းအတည်ပြုပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်ရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ညစ်ညမ်းသောအသံနှင့်သင်၏စတိုင်ဝေဖန်မှုနှင့်ညစ်ပတ်စေသောအသံများရှိသော jbl ကိုမျှဝေပါ။ သင်၏ထုတ်ကုန်သည်အခြားသူများထက် jbl နှင့်မတူပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နာရီပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကြာမှာမဟုတ်ဘဲ၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ shit ဖြစ်တဲ့အခါ၊ သယ်ဆောင်သွားမှာမဟုတ်ဘဲ၊ ဘက်ထရီအားသွင်းစရာမလိုတဲ့ jbl နဲ့ဆက်လုပ်ပါ။
PC ကြွက်တွေကိုအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီအမှတ်တံဆိပ်ဟာဈေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးဘလူးတုသ်စပီကာများထဲမှဘယ်လိုပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိသေးပါဘူး။ သူတို့ဟာအမြဲတမ်း "ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း" တွင်ဤကဲ့သို့သောအနည်းငယ်တိကျသောနှင့်အတူပေါ်လာပါသည်။ Logitech ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိဖြောင့်မတ်အောင်လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ပေးပါသလဲ။ Bass နှင့် Wilkins၊ JBL သို့မဟုတ် Bang & Olufsen တို့နှင့်အတူအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်လုံးဝကင်းမဲ့ပြီးဘေ့စ်၏အလွဲသုံးစားမှုကြောင့်စပီကာများ၏အမှိုက်သရိုက်များသည်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း။ ဒါကအမှန်တကယ်အဆင့်မြင့်အသံအထူးကုအနည်းငယ်ကိုသာဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
အဲလ်ဘတ် Mosquera ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ UEboom2 ကိုဝယ်လိုက်ပြီးကြာချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသံသယဝင်တယ်၊ တကယ်ကိုနည်းနည်းလေးကြာတယ်၊ ၃ နာရီမရောက်သေးဘူး။ ငါ့ကိုကူညီမယ့်ကျွမ်းကျင်သူ? တစ်ယောက်ယောက်ကအာမခံတစ်ခုကိုလျှောက်ထားပြီးပြီဆိုတာကိုငါသိချင်တယ်။
Israel Nuts အားပြန်ကြားပါ
Seagate သည်၎င်း၏ 14 နှင့် 16 တီဘီ hard drives အသစ်အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်
ကနေဒါစတော့အိတ်ချိန်းကြောင့် Megaupload 2.0 ကိုနှောင့်နှေးခဲ့သည်